“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္” အမည္ ဘယ္သူ ေပးသလဲ? – Let Pan Daily
Let Pan | September 7, 2020 | Knowledge | No Comments
၁၉၄၅ ခုႏြစ္၊ ဇြန္လ၏ တစ္ေန႔ေသာေန႔ရက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနထိုင္ရာ တာဝါလိန္းလမ္း အိမ္ႀကီး၌ခေလး ငိုသံေလး ပ်ံ႕လြင့္ေန၏။အူဝဲ——–အူဝဲ——— ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စီးေတာ္ယာဥ္ဝူစေလကား (RC-2874) ၿခံဝင္းအတြင္းသို႔အပါးေတာ္ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွ ေမာင္းႏွင္၍ ဝင္လာ၏။အိမ္အဝင္ ေလွခါးရင္း ေရာက္ေသာ္ ကားရပ္၍ေနာက္ခန္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆင္းလာၿပီး ထုံးစံအတိုင္းေျခလွမ္းအသြက္ႏွင့္ တက္သြား၏။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်က္ႏွာမွာမူ ခါတိုင္းလိုသုန္မႈန္ေတြးေတာေနပုံမ်ိဳး မဟုတ္၊လိုခ်င္တာရလာ၍ ပီတိျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ ရွိ၏။
အိမ္ႀကီး၏ ေအာက္ထပ္ဝရံတာတြင္ သားေတာ္ေမာင္ ေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ေအာင္ဆန္းလင္းတို႔ကို တပည့္မ်ားကထိန္းေက်ာင္းကာ စက္ဘီးစီးလ်က္ ေဆာ့ကစားေနၾက၏။“ငါ့သားေတြ ကစားေနၾကတာကိုး…ေအး—-ေအး—- ကစားၾက။ေဖေဖ.. သားတို႔ ညီမေလးဆီ သြားလိုက္ဦးမယ္” ဟု ဆိုကာသား ႏွစ္ေယာက္၏ ဦးေခါင္းကို ဖြဖြကေလးပုတ္ကာအိမ္ထဲသို႔ ဝင္၊ အေပၚထပ္သို႔ အေျပးတစ္ပိုင္း တက္သြားေလ၏။အိပ္ခန္းအတြင္းတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္သမီးကေလးေမြးဖြားၿပီးစ ရက္ပိုင္းသာရွိေသး၍ဦးေခါင္းကို အႏွီးပတ္ေပါင္းကာ သမီးကိုပုခက္အတြင္း သိပ္ၿပီး၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဝင္လာတာကို ျမင္ေသာ္
“ေမာင္ ဒီေန႔ ျပန္လာတာ.. ေစာတယ္ေနာ္”“ ေအးကြာ ငါ့သမီးနာမည္ စဥ္းစားရလို႔ ေစာျပန္လာတာ”“ေမာင္ကလဲ သမီးက ရက္သားေလးပဲရွိေသးတာကိုေနာက္မွ ေအးေအးေဆးေဆး ေပးရင္လည္း ရရဲ႕သားနဲ႔”(ေျပာရင္းဆိုရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေပၚဝတ္ စစ္ယူနီေဖာင္းကိုခြၽတ္၊ လက္ဆြဲအိတ္ကိုယူကာ ေျပာ၏)“ကဲ ေျပာပါဦး–သမီးအမည္က ဘာတဲ့လဲ”“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္”(သမီးကေလးသည္ ပုခက္တြင္း အိပ္ေပ်ာ္ခါစ ၿပဳံးသေယာင္ရွိေနေလ၏)ယေန႔ (၁၉.၆.၂၀၂၀) တြင္ က်ေရာက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏(၇၅) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အမွတ္တရ~
“အောင်ဆန်းစုကြည်” အမည် ဘယ်သူ ပေးသလဲ?
၁၉၄၅ ခုနွစ်၊ ဇွန်လ၏ တစ်နေ့သောနေ့ရက် ဗိုလ်ချုပ်နေထိုင်ရာ တာဝါလိန်းလမ်း အိမ်ကြီး၌ခလေး ငိုသံလေး ပျံ့လွင့်နေ၏။အူဝဲ——–အူဝဲ——— ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ် စီးတော်ယာဉ်ဝူစလေကား (RC-2874) ခြံဝင်းအတွင်းသို့အပါးတော်မြဲ ဗိုလ်ထွန်းလှ မောင်းနှင်၍ ဝင်လာ၏။အိမ်အဝင် လှေခါးရင်း ရောက်သော် ကားရပ်၍နောက်ခန်းမှ ဗိုလ်ချုပ် ဆင်းလာပြီး ထုံးစံအတိုင်းခြေလှမ်းအသွက်နှင့် တက်သွား၏။ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာမှာမူ ခါတိုင်းလိုသုန်မှုန်တွေးတောနေပုံမျိုး မဟုတ်၊လိုချင်တာရလာ၍ ပီတိဖြစ်နေသကဲ့သို့ ရှိ၏။
အိမ်ကြီး၏ အောက်ထပ်ဝရံတာတွင် သားတော်မောင် အောင်ဆန်းဦးနှင့်အောင်ဆန်းလင်းတို့ကို တပည့်များကထိန်းကျောင်းကာ စက်ဘီးစီးလျက် ဆော့ကစားနေကြ၏။“ငါ့သားတွေ ကစားနေကြတာကိုး…အေး—-အေး—- ကစားကြ။ဖေဖေ.. သားတို့ ညီမလေးဆီ သွားလိုက်ဦးမယ်” ဟု ဆိုကာသား နှစ်ယောက်၏ ဦးခေါင်းကို ဖွဖွကလေးပုတ်ကာအိမ်ထဲသို့ ဝင်၊ အပေါ်ထပ်သို့ အပြေးတစ်ပိုင်း တက်သွားလေ၏။အိပ်ခန်းအတွင်းတွင် ဒေါ်ခင်ကြည်သည်သမီးကလေးမွေးဖွားပြီးစ ရက်ပိုင်းသာရှိသေး၍ဦးခေါင်းကို အနှီးပတ်ပေါင်းကာ သမီးကိုပုခက်အတွင်း သိပ်ပြီး၍ ဗိုလ်ချုပ် ဝင်လာတာကို မြင်သော်
“မောင် ဒီနေ့ ပြန်လာတာ.. စောတယ်နော်”“ အေးကွာ ငါ့သမီးနာမည် စဉ်းစားရလို့ စောပြန်လာတာ”“မောင်ကလဲ သမီးက ရက်သားလေးပဲရှိသေးတာကိုနောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ပေးရင်လည်း ရရဲ့သားနဲ့”(ပြောရင်းဆိုရင်း ဗိုလ်ချုပ်၏ အပေါ်ဝတ် စစ်ယူနီဖောင်းကိုချွတ်၊ လက်ဆွဲအိတ်ကိုယူကာ ပြော၏)“ကဲ ပြောပါဦး–သမီးအမည်က ဘာတဲ့လဲ”“အောင်ဆန်းစုကြည်”(သမီးကလေးသည် ပုခက်တွင်း အိပ်ပျော်ခါစ ပြုံးသယောင်ရှိနေလေ၏)ယနေ့ (၁၉.၆.၂၀၂၀) တွင် ကျရောက်သောနိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၇၅) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ~
ေရွ႕သြားႏွစ္ေခ်ာင္း ကိုၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္မယ့္ သင့္ရဲ႕ အေကာင္း ဆုံး ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးမ်ား
သင္ညအိပ္ရင္ ဘယ္ဘတ္ ကို ေစာင္းအိပ္ တက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ေတာ့ ထီေပါက္တာထက္ ပိုၿပီးတန္ဖိုး ရွိသြားပါၿပီ
“ကင်ဆာပျောက်ပြီ မြန်မာပြည်” လူတိုင်း သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်ကြပါစေ (အများသိအောင်ရှယ်ထားပေးပါအုံး …)
အတွင်းအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ အလှမယ် ဆွေဇင်ထက်
ကြည့်မိသူတိုင်း ပါးစပ် အဟောင်းစားဖြစ်သွားစေမယ့် ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို ချပြလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ရေချိုးခန်း ထဲက ရေချိုးနေတဲ့ အကြမ်းစား ပုံတွေချပြလိုက်တဲ့ “နန်းအမရာ”
မွေးနေ့အလှူလေး အဖြစ် လူအယောက်(၁၀၀) စာ အတွက် အာဟာရဒါန အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
ရင်ခုန်စရာကောက်ကြောင်းအလှတွေ နဲ့ တင်သားလေးကို လှုပ်ခါပြီး အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ ဗီဒီယို
အသက်(၁၇)နှစ် နဲ့ Tik Tok မှာ လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီးနောက် သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးမလေး ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး